“““အွန်လိုင်းပေါ်ကဂုဏ်အတု””” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » “““အွန်လိုင်းပေါ်ကဂုဏ်အတု”””
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Nov 10, 2012 in Short Story | 10 comments
မိုးပြာတစ်ယောက်တစ်ယောက်အခုတလောအင်တာနက်တော်တော်လေးသုံးဖြစ်သည်။CDMA800 ဖုန်းလိုင်း ၀ယ်ပြီးစတည်းကမကြာမကြာသုံးဖြစ်လာတာပါ။စသုံးကာစကတော့ စလုံးမှာရောက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချတ်တင်ပြောရင်း ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ဆိုရှယ်ဆိုဒ်တွေကိုသုံးဖြစ်လာသည်။
“ဟေ့စစ်ကိုင်းကဘီလူးမ အင်တာနက်သုံးတာသတိထားနော် အွန်လိုင်းမှာ အညစ်အကြေးတွေနင်းမိဦးမယ်။
စလုံး ရောက်နေတဲ့သူငယ်ချင်း အင်ကြင်းကလှမ်းနောက်သည်။သူငယ်ချင်းတွေက မိုးပြာရဲ့နာမည်ကို
Sky Blue ကိုနောက်ပြီး စစ်ကိုင်းကဘီလူးမ ဟုခေါ်ခေါ်စတတ်ကြသည်။
“ဟဲ့ အွန်လိုင်းမှာ နင်တံဆိပ်နှိပ် မနှိပ်မြင်ရတာမို့လား ဟိဟိ တစ်ချို့ကလည်းဇွတ်”
“အောင်မယ် အရူးမ တော်စမ်းပါ စကားအကောင်းပြော”
မိုးပြာရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက အသက်၃၀နားနီးလာတာတောင် ကလေးတွေလို စကြ၊နောက်ကြတုန်း။
ဒီလိုနဲ့မိုးပြာတစ်ယောက်အင်တာနက်သုံးရင်း၊ဆိုရှယ်ဆိုဒ်တွေသုံးရင်းက အွန်လိုင်းဘော်ဒါတွေတိုးပွားလာခဲ့ သည်။မိုးပြာနဲ့ချတ်တင်ပြောတတ်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဂျွန်လေးဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ ရောက်လာသည်။သူကသူ့ကိုယ်သူ ဆေးကျောင်းသားလို့ပြောသည်။မိုးပြာကတော့ ဟုတ်မဟုတ်သံသယမရှိ။ ကိုယ့်မောင်လေးလိုသဘောထားပြီးခင်လိုက်တာပင်။
“အဲ…သြော်…ဟိုဟာ ဂျွန့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး အိမ်က အစ်ကို့အတွက်ပါ”
“အဲ..ဟို ကိုကိုက ငယ်ငယ်ကကျန်းမာရေးချူချာပြီး 10တန်းအကျမှာကျောင်းထွက်လိုက်ရတာ
မိုးပြာစဉ်းစားမိတော့ပြီ ဂျွန်လေးကအရင်ကပြောတော့ မိဘအသင့်အတင့်ချမ်းသာတဲ့ဆေးကျောင်းသားတဲ့ အခုလိုလူတစ်ယောက်ရဲ့အကိုက ဒရိုင်ဘာလုပ်လို့အဆင်ပြေပါ့မလား
“ဟိုလေ ဂျွန်လေးအစ်ကိုက ဒရိုင်ဘာ အဲ..မမစကားမှားသွားရင်ဆောရီး ဟိုလေ ဂျွန်လေးတို့မိဘကပြေလည် တယ်မဟုတ်လား”
“ဒီလိုပါမမ ကိုကိုကအိမ်ထောင်ပြုသွားတော့ မာမီတို့ကလှည့်မကြည့်ဘူးလေ။ဂျွန်က ကိုကို့ကိုသနားလို့ကူညီချင် တာ သူတတ်တာကလဲကားမောင်းပဲလေ ဒါတောင်အိမ်ကကားကိုမောင်းခဲ့လိုတတ်နေတာ အခုတော့အဆင်ပြေ တာပေါ့ဒရိုင်ဘာဆိုလည်းခန့်လို့ရပါတယ်မမ ဂျွန့်ကိုအားနာဖို့မလိုပါဘူး”
ဂျွန်လေးကထိုသို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတော့ မိုးပြာက ခင်ပွန်းသည် ကိုနောင့်ထံပြောပေးမိသည်။
“အံမယ် ငါ့မိန်းမတောင်အွန်လိုင်းမှာ အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီဖွင့်လို့ရနေပြီ ..”
“အင်း…ဒရိုင်ဘာကတော့လိုတယ်ကွ…သူ့အက်ိုကအသက်(၂၅)ဆိုတော့မငယ်ဘူးလား ကိုနောင်တို့က အသက်(၃၀)ကျော်လောက်ခန့်ချင်တာ”
“ဘာကွာလို့လဲ ကိုနောင်ရယ် တွေ့ကြည့်လိုက်ပါ မိုးလေး ကူညီချင်လို့ပါနော်”
တွေ့ကြည့်တာပေါ့ဆိုပေမယ့် မိုးလေးမျက်နှာကြောင့် ဂျွန်လေးအကို ကိုမျိုးထက်တစ်ယောက် ကိုနောင်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ ဒရိုင်ဘာအလုပ်ရချေပြီ။
အခုတလောအွန်လိုင်းပေါ်မှာဂျွန်လေးကိုသိပ်မတွေ့ ဂျွန်လေးတက်နေကျအချိန်တွေမှာလည်းမတွေ့ ကောင်လေးကျောင်းစာတွေနဘမ်းလုံးနေပြီပေါ့။ဆေးကျောင်းသားဆိုတာဒီလိုပါပဲ လို့တောင်တွေးမိသေး။ မိုးပြာလည်းတခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ချတ်တင်ပြောလိုက် ဆိုဒ်လေးတွေဝင်ကြည့်လိုက်နဲ့ အားလပ်ချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးနေတော့သည်။
“ဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူး ၀ပ်ရှော့ထိုးခဲ့တယ် သြော် ဒီမှာလေ မိုးပြာပြောပေးတဲ့ ဂျွန်လေးဆိုတာရဲ့အကို”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမမိုး ဂျွန်လေးပြောပြလို့မမမိုးကျေးဇူးကြောင့်ဆိုတာသိရတယ်”
ဂျွန်လေးအကိုက ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံထဲကဂျွန်လေးနဲ့အတော်တူသည်။ဓာတ်ပုံကသေးတော့သိပ်မသဲကွဲပေမယ့် တူတာတေ့ာတော်တော်တူသည်။အင်းလေ ညီအကိုပဲ။ပြီးတော့ အသက်ကလဲ မကွာသလို။
“ဒါနဲ့ ဂျွန်လေးတောင်အင်တာနက်မသုံးဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ် ကျောင်းစာတွေများနေတယ်ထင်ရဲ့”
မျိုးထက်ဆိုသူ မျက်နှာတစ်ချက်ပျက်သွားပြီး ခေါင်းကိုငုံ့သွားကာ
“အင်း…ဟုတ် ..ဟုတ်မယ် မမမိုး ကျွန်တော်လဲ အိမ်မရောက်တာကြာပြီ ဒီကောင်နဲ့တောင်မတွေ့ဘူး..သွား လိုက်ပါဦးမယ်နော်
ဒီနေ့ညတော့ဂျွန်လေးက အသုံးပြုနေကြဆိုဒ်တစ်ခုမှာ ဘလော့ပို့စ်တွေတင်ထားသည်။မိုးပြာလည်း ၀င်အားပေးလိုက်သေးသည်။လူကိုတော့မတွေ့ရ။ကမန်းကတမ်းဝင်တင်ထားတာဖြစ်မည်။
“ဒီမှာကွာ ကိုယ့်လက်ပ်တော့ပ် ကိုကိုယ်မရှိခင် ဘယ်သူက မန်မိုရီစတစ်ထည့်သုံးသွားလည်းမသိဘူး။ဗိုင်းရပ်စ် တွေပါထိထားတယ်”
“ကိုနောင် မရှိတုန်းဘယ်သူကိုနောင့်အခန်းထဲဝင်လို့လဲ စဉ်းစားကြည့်ပါလား”
“အင်း…ကိုယ် ဒါရိုက်တာနဲ့သွားတွေ့တော့ ကော်ရစ်တာမှာမျိုးထက်ကိုတွေ့တာနဲ့ အခန်းထဲကမီးချောင်းပျက်နေ တာဝင်လဲပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။မျိုးထက်ပဲဝင်မှာ ဒီကောင်ကတော့စတစ်မသုံးလောက်ပါဘူး”
ကိုနောင့်ကိုပြောအပြီး မိုးပြာကွန်ပျူတာဘက်လှည့်လိုက်စဉ် ဂျွန်လေးရဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုမျက်စိရောက်သွားရာ
ကိုနောင်က ဗိုက်နာတယ်ဆိုပြီးအိမ်သာဝင်သွားရာ မိုးပြာကမန်းကတန်းကိုနောင့်စားပွဲသို့ချဉ်းကပ်လိုက်ပြီး။
အင်တာနက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Browser တွေကိုလိုက်ဖွင့်လိုက်ပြီး History တွေကိုစစ်ကြည့်လိုက်ရာ… တွေ့ပါပြီ Mozilla ထဲမှာ ၀င်ရောက်အသုံးပြုထားတဲ့ အရိပ်အယောင် ဂျွန်လေးသုးံတတ်တဲ့ ဆိုရှယ်ဆိုဒ်တွေနဲ့ ဂျွန်လေးတင်ထားတဲ့ပို့စ်တွေ ကမန်းကတန်းနဲ့မို့ History တွေကို clear မလုပ်သွားနိုင်တာဖြစ်မယ်။ ၀ါသနာကိုမတားနိုင်တာနဲ့ရသမျှအချိန်လေးမှာ အမြဲတမ်းဆောင်တတ်တဲ့ စတစ်နဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်မယ်။
သြော်…ဂျွန်လေးရယ် မမမိုးအပေါ်ရိုးသားစွာချဉ်းကပ်လည်းရရက်နဲ့ ဆေးကျောင်းသားဆိုတဲ့ဂုဏ်အတုကိုခုတုံး လုပ်လိမ်ညာခဲ့တာပင်။အဲဒီလိုဂုဏ်တွေက
မမမိုးတို့အတွက်ဘာအသုံးဝင်မှာမို့လဲ ချစ်သူအနေနဲ့ချဉ်းကပ်မယ့် ကောင်မလေးတွေဆိုရင်ရော တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့သိရမှာပဲမဟုတ်လား။
အဲ…အွန်လိုင်းမှာပဲ တစ်ရွာတည်ပြီး ဂုဏ်တု၊ဂုဏ်ယောင်နဲ့ထည်ဝါချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ လိမ်ခြင်းတွေဟာ အဆုံးသတ်လို့ရတောာ့မှာမဟုတ်ဘူးကွယ်။လိမ်ညာခြင်းကို ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက် လိမ်ညာခြင်းဒိုင်းတွေကိုပဲ အခါခါသုံးနေရလိမ့်မယ်ဆိုတာ အွန်လိုင်းမောင်လေးသိအောင် မမမိုးပညာပေးဘလော့ပို့စ်လေးတင်ပေးသွား ရလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုဘ၀မျိုးကိုမဆို ခင်မင်ခြင်းမှာ အကန့်အသတ်မရှိကြပါဘူးဆိုတာသိကြပါစေလို့ မမမိုးဆုတောင်း လိုက်ပါတယ်။
မိုးပြာစိတ်ထဲမှထိုသို့ပြောရင်း ဒီကိစ္စကို ကိုနောင်မသိရအောင်ဂျွန်လေးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ History တွေကိုသန့်စင် လိုက်ရသည်။ကိုမျိုးထက်(ခေါ်)ဂျွန်လေးကို ရှေ့လျှောက်ကိုနောင်မယုံကြည်တော့ပဲ အလုပ်ဖြုတ်တာမျိုးအထိ ဖြစ်သွားရင် မကောင်းဘူးမို့ပါ။အခုအနေက ကိုမျိုးထက်တစ်ယောက် ကိုနောင့်အလုပ်မှာရိုးသားကြိုးစားကြောင်း အမြဲကြားနေရတာပဲလေ။ဂျွန်လေးကိုတွေ့မှ အကျိုးအကြောင်းပြောပြဆုံးမတော့မည်ဟုသာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ သည်။
အမှန်ဆိုရင် နန်းတော်ရာသူပြောသလို ရိုးရိုးသားသား ဖြောင့်မတ်စွာ ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး ကူညီရရင် ပိုကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ရနိုင်တာပေ့ါ။ :buu:
ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးကို ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ဖတ်ရလို့ ဗဟုသုတရပါတယ်…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂျွန်လေးက တစ်ခြားသူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ရိုးသားတယ်လို့ ပြောလို့ရပါသေးတယ်…
သူ့ဘက်ကတွေးကြည့်ရင်တော့ သူ့ဘ၀သူအားငယ်နေပြီး ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတပ်လို့ရတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သူဖြစ်ချင်တဲ့ ဆေးကျောင်းသားဘ၀ကို ခဏအငှားတပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပုံရပါတယ်….
တော်သေးတယ် ကောင်လေးက များများ အမြတ်ထုတ်မသွားလို့ ….
စိတ်ဝင်စားစရာ မှတ်သားစရာပိုစ့်လေးမို့ အားပေးသွားပါတယ်….
စကား အတု … (နောက်ဘာကျန်သေးလဲ)
သီဟသူရ တိမ်မည်း (ခေတ္တ-ရန်ကုန်) says:
အိုင်ဒီယာကို ချီးကျူးတယ်ဗျို့ 
ဒီထက်ပိုဆန်းရင် ရင်သိမ့်သိမ့်တုန် ၀တ္တုတိုဖြစ်မှာပါ……
၀ါသနာကိုမတားနိုင်တာနဲ့ရသမျှအချိန်လေးမှာ အမြဲတမ်းဆောင်တတ်တဲ့ စတစ်နဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မန်နေဂျာ…တနည်း..အလုပ်ပေးထားတဲ့ကျေးဇူးရှင် ရဲ့
ကွန်ပြူတာကို ခိုးသုံးတာတော့ စာရိတ္တညံ့ဖျဉ်းတာပဲ..ဒီလိုကောင်မျိုး
အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်း အွန်လိုင်းချစ်သူအပြည့်အဝမယုံကြည်သင့် ။